IXiaomi Mi A3 isungulwe ngokusesikweni eSpain | I-Androidsis
IXiaomi Mi A3 iya kuthengiswa eSpain ngokusemthethweni
Kwiveki ephelileyo iXiaomi Mi A3 yaziswa ngokusemthethweni, ngomnyhadala owawubanjelwe eSpain. Kwiiyure ezimbalwa emva komsitho, uphawu lwalo uqobo wasishiya neenkcukacha ekusungulweni kolu luhlu luphakathi lutsha kwilizwe lethu. Okokugqibela, usuku lufikile, kuba ifowuni iyathengiswa ngokusemthethweni.
IXiaomi Mi A3 yi Isizukulwana sesithathu sophawu lwaseTshayina ukusebenzisa i-Android One njengenkqubo yokusebenza. Uluhlu lweefowuni oluphumeleleyo, ke esi sizukulwana sitsha sasilindelwe ngamehlo abomvu. Ithembisa ukuba yimpumelelo entsha kumenzi waseTshayina.
Ukusukela namhlanje kunokwenzeka ukuthenga ifowuni ngokusemthethweni. Iyafumaneka kwintengiso kwiivenkile zebranti, kunye nakwiwebhusayithi yayo esemthethweni. Ukongeza, nakwezinye iivenkile, ezinje ngeAmazon, iEl Corte Ingles okanye iNdlu yeFowuni yam. Ke kuya kuba lula ukuyifumana le Xiaomi Mi A3 eSpain.
Iinguqulelo ezimbini zefowuni ziyathengiswa, kuxhomekeke kwindawo yokugcina. Imodeli yesiseko ine-64 GB yokugcina kunye ifika ngexabiso lama-249 ee-euro ukuya eSpain. Ngelixa imodeli ene-128 GB inexabiso kwi-279 euro. Omabini amaxabiso alungileyo kuluhlu oluphakathi.
Ke ngoko, yonke into ibonisa ukuba le Xiaomi Mi A3 Iya kuba yimpumelelo entsha kuphawu lwesiTshayina kwilizwe lethu. Kuba izizukulwana ezidlulileyo bezithengisa kakuhle kwaye bekukho umnqweno wokubona ukuba basishiyele ntoni kolu luhlu. Uluhlu oluphakathi oluphakathi, olubonakala ngaphezu kwazo zonke iikhamera zalo ezilungileyo kunye nomthamo omkhulu webhetri.
Ke ngoko, ukuba ubucinga ukuthenga le Xiaomi Mi A3, ungasele uyenzile. Iyafumaneka kwiivenkile ezininzi, ke ngekhe ube nengxaki kule meko. Ifowuni iyafumaneka ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama kunye grey.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi A3 iya kuthengiswa eSpain ngokusemthethweni
I-Honor Band 5 ithengisa e-China ngosuku lwayo lokuqala
Imbeko ayilahlanga uthotho lweMax kunye neNqaku kwikhathalogu yayo yee-smartphones kwaye iza kuzihlaziya kungekudala